ဂျိုဆွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျိုဆွန်း သို့မဟုတ် ကျိုဆောန် (ကိုရီးယား: 대조선국) သည် ရာစုနှစ် ၅ ခုမျှ တည်တံ့သော ကိုရီးယားမင်းဆက်တခု ဖြစ်သည်။  ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘုရင်စနစ်၏ နောက်ဆုံးမင်းဆက်လည်း ဖြစ်၏။  ဂိုလျောမင်းဆက်ပျက်သည်နောက် ၁၃၉၂ ခု၊ ဇူလိုင်လတွင် လီဆောင်ဂယ်က ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်ကို ထူထောင်ပြီး ၁၈၉၇ ခု၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကိုရီးယားအင်ပါယာက ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်နေရာကို ယူသည်။ 
ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်၏ နှစ် ၅၀၀ အတွင်း ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို အားပေးသဖြင့် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒသစ်မှာ နိုင်ငံ၏အတွေးအခေါ်ဝါဒ ဖြစ်လာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပိတ်ပင်ကာ အချို့ကို ပြစ်ဒဏ်စီရင်သည်လည်း ရှိခဲ့၏။ ဤမင်းဆက်များတွင် လက်ရှိကိုရီးယားနယ်နိမိတ်ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း အုပ်ချုပ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စာပေ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပိုင်းတို့ မြင့်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၅၉၀ ကာလတွင် ဂျပန်တို့ကျူးကျော်မှုကြောင့် နိုင်ငံမတည်မငြိမ် ဖြစ်သည်။ ၁၆၂၇ ခုတွင် ကျင်မင်းဆက်သစ်သည်၎င်း၊ ၁၆၃၆-၃၇ တွင် ချင်းမင်းဆက်သည်၎င်း ကျူးကျော်လာဖူးသည်။ ၎င်းဖြစ်ရပ်များနောက်တွင် ကုန်သွယ်ရေးကိုပင် ကန့်သတ်ကာ သီးခြားနေမူဝါဒကို ကျင့်သုံးလာသည်။ ယင်းသို့ မန်ချူးရီးယားမှ ကျူးကျော်မှုတို့ ပြီးသည်နောက် နှစ် ၂၀၀ ခန့် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေရသည်။ ၁၉ ရာစုအရောက်တွင် မင်းမိသားစုပြဿနာ၊ ပြည်တွင်းဆူပူမှု၊ အာဏာအပြိုင်အဆိုင်၊ နိုင်ငံတကာဖိအားတို့ကြောင့် ဂျိုဆွန်းနိုင်ငံမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြိုလဲသွားသည်။
ဂျိုဆွန်းခေတ်သည် ယနေ့ခေတ်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတို့ မြစ်ဖျားခံရာဖြစ်ပြီး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အယူအဆ၊ နီတိ၊ ဓလေ့ထုံးစံတို့အပြင် ခေတ်သစ်ကိုရီးယားဘာသာအရေးအသား အပြောအဆိုတို့ကိုပါ လွှမ်းမိုးသည်။ ၎င်း၏နှစ် 500 သက်တမ်းကာလအတွင်း၊ Joseon သည် ကိုရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကွန်ဖြူးရှပ်အယူဝါဒများနှင့် အယူဝါဒများကို ချုပ်ကိုင်ထားရန် အားပေးခဲ့သည်။ Neo-Confucianism ကို နိုင်ငံတော်၏ အတွေးအခေါ်သစ်အဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ရံဖန်ရံခါ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ Joseon သည် လက်ရှိကိုရီးယားနယ်မြေအပေါ် ၎င်း၏ထိရောက်သောအုပ်ချုပ်မှုကို စုစည်းခဲ့ပြီး ဂန္ထဝင်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စာပေနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတို့၏ မြင့်မားမှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ 1590 ခုနှစ်များတွင် ဂျပန်တို့၏ကျူးကျော်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်သည် ပြင်းထန်စွာ အားနည်းခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက် Joseon သည် 1627 နှင့် 1636-1637 တို့တွင် ချင်းမင်းဆက်တို့ အသီးသီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကာ ပြင်းထန်သော အထီးကျန်ဝါဒကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိုင်းပြည်ကို အနောက်စာပေတွင် ရသေ့နိုင်ငံအဖြစ် လူသိများလာခဲ့သည်။ မန်ချူးရီးယားမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများ ပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ Joseon သည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး အနှစ် 200 နီးပါး ကာလကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ 18 ရာစု နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ အထီးကျန်နေချိန်တွင် ပြန်လည်ရရှိလာသည့် တန်ခိုးအာဏာများ ဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရန်ပွဲများ၊ အာဏာလွန်ဆွဲပွဲများ၊ နိုင်ငံတကာဖိအားများနှင့် အိမ်တွင်းပုန်ကန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဂျိုဆွန်နိုင်ငံသည် ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဂျိုဆွန်ခေတ်သည် ခေတ်သစ်ကိုရီးယားအတွက် ကြီးမားသော အမွေအနှစ်တစ်ခု ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျင့်ဝတ်၊ စံနှုန်းများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောထားများ၊ ခေတ်သစ်ကိုရီးယားဘာသာစကားနှင့် ၎င်း၏ ဒေသိယစကားများနှင့်အတူ၊ အများစုသည် Joseon ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ခေတ်သစ်ကိုရီးယား ဗျူရိုကရေစီနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းခွဲများ ကိုလည်း Joseon ခေတ်တွင် ထူထောင်ခဲ့သည်။
↑ "Chosŏn dynasty | Korean history". Encyclopedia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc.
↑ D. K (2019). Women Our History. p. 82.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုဆွန်း&oldid=734002" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။